Shirkaa Isbedelka Cimilada ( Climate Change) Ujeedadiisu Waa Maxay
Saturday November 20, 2021 - 09:01:48 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: Cali maxam biixi
Dadku arin wanaagsan ayay xumeyn karaan .
Arin xunna wey qurxin karaan
Hadaba waa maxay ujeeda reer galbeedku ka leeyihiin barnaamijka lacagta badan ay ku bixinayaan ee isbedelka cimilada aduunka, Waa maxay ujeedada dalalka reeŕ galbeedķu ka leeyihiin ?
Maxayse uga jeedaan isbedelka cimilada iyo xuquuqal insaanka ama xuquuqda shaqaalaha?
Dalalka reer galbeedku muddo dheer ayay ahaayeen dalal wershedo leh oo caalamka meel kasta wax u dhoofiya oo suuqyada caalamka ku haysta wax soo saarkooda oo aan cidina ku haysan .
Waxaanay sameysteen ururo caalami ah oo ilaaliya ganagsigooda oo dal kastana ka saxeexay.
Dalalka dunida sadexaad qaarna qasab Bay kaga saxeexeen , qaarna way ka saxeexeen
Hadaba sanadihii u danbeeyay dalalkii dunida sadexaad qaarkood ayaa wershedo iyo waxsoosaar yeeshay , sida china-ha iyo India oo la be
tartamaysa ay dalalkii reer galbeedka iyo wax soo saarkoodii , oo weliba ka saaray suuqyadii ay haysteen iyagu . Wax soo saarkoodiina dhaafay .
Dalalkii reer galbeedka waxay la kulmeen dhibaatooyin dhaqaale oo kaga yimi dalalkii dunida sadexaad oo ay wax badan ka soo dhoofsadaan , Halkin ay wax uga dhoofin jireen
Dalalkii reer galbeedku waxay ku dhaliileen dalalkii dunida sadexaad in ay si sharci daro ah ugu adeegsadaan ganacsiga aduunka oo ay dhaliilo badan u sameeyaan (sida xaalada ka dhex taagan da.ka USA iyk dalka china)
Dhaliilahaa faraha badan ee ay qaar sax yihiin , Laakiin intiisa badani aanay waxba ka jirin , arimaha xuquuqal insaanka iyo xuquuqda shaqaalaha .
Dalalka reer galbeedka ee qaniga ah oo arimahan uga jeeda in wax soo saarka ay soo saaraan dunida sadexaad in ay mushaharka shaqaalaha iyo waxa ay ku kacayaan wax soo saarkoodu uu ku qaali garoobo dunida sadexaad ,
Si ay ula tartami karaan qarashka ku baxaaya wax soo shark dalalka dalalka reer galbeedka iyo wax soo saarka dunida sadexaad .
Dalka china India iyo brazils mushaharka shaqaala aad buu u gar yahay .
Dawladaha reer galbeedka waxay doonayaan in ay wersheahooda ay bedelaan dalalka dunida sadexaad oo ay iyaga ka iibsadaan wershedo cusub .
Arintaasna dawladaha dunida sadexaad ma ogola .
Dawladaha dunida sadexaad waxay leeyihiin , ma bixin karno mushahar weyn , hadii aanu fulino arimaha aad sheegaysaan iyo xuquuqal insaanka
arinkaasu waxa ka dhalanaa ( waa I aanu kacno oo wershedaha iska xidhno , )
Isbedelka cimilada idinka (dalalka reer galbeedka) ayaa wisikheeyay hawada dunida iyo degaanka
Hadaba yaa ka faa'iida arimahan oo dhan?
Waxa ka faa'iida tijaarta iyo ganacsatada dunida sadexaad iyo kuwa tijaarta ah ee reer galbeedka oo iyana maal gasheda dunida sadexaad
(Mushaharka shaqaaLaha oo hooseeye awgeed)
Hadaba arimahan oo dhan , waxay uga jeedaan in ay la dagaalamaan , wax soo saarka dunida sadexaad oo ay curyaamiyaan wax soo saarkooda iyo dhaqaalahooda .
Maaha sheekado xuquuqda shaqaalaha iyo badbaadinta iisbedelka cimilada ku yimi .
Waa fikrad ay wataan tijaarta iyo maal qabeenada dunida reer galbeedka oo ku saleysan amaga yo wax soo saarkayaga uxidhnaw
Waa gumeysi dhaqaale oo casriyaysan .